डेब्युमा लुकाकुको गोल- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
मिलान — बेल्जियमका फरवार्ड रोमेलु लुकाकुले डेब्युमा गोल गरेपछि इन्टर मिलानले इटालीको सिरी ‘ए’ मा सोमबार राति लेसीलाई ४–० ले हरायो । यससँगै नयाँ प्रशिक्षक एन्टोनियो कोन्टेले लिगमा शानदार सुरुआत पनि लिएका छन् ।
इन्टरले ७ करोड ३० लाख डलरमा लुकाकुलाई म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट अनुबन्ध गरेको थियो । सान सिएरोमा भएको खेलमा लुकाकुको गोल टिमका लागि तेस्रो रह्यो । उनले बढुवा भएर माथिल्लो डिभिजन पुगेको लेसीका गोलरक्षक ग्याब्रियलको भुलमा सजिलै गोल गरे । त्यससँगै २६ वर्षीय लुकाकुले रंगशालामा उपस्थित ६५ हजार दर्शकको अभिवादन पनि स्विकारे । इन्टरले क्रोएसियाली खेलाडी मार्सेलो ब्रोजोभिचको गोलले २१ औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो ।
इन्टरमा छैटौं सिजन बिताइरहेका ब्रोजोभिचको क्लबका लागि यो १५ औं व्यक्तिगत गोल हो । लगत्तै सासौलोबाट ऋणमा आएका स्टेफानो सेनीले दोस्रो गोल थपे । लेसीले अन्तिम १५ मिनेटको खेल १० खेलाडीमा सीमित भएर खेलेको थियो । ब्राजिली खेलाडी डिएगो फारिस रातो कार्ड खाएर मैदान छाड्न बाध्य रहे ।
एन्टोनियो कान्डेरेभाले ८४ औं मिनेटमा चौथो गोल थपे । यो जितपछि इन्टरले उपाधि होडमा रहेका लगातार आठपल्टको डिफेन्डिङ च्याम्पियन युभेन्ट्स र गत सिजन दोस्रो रहेको नेपोलीसँगै सुरुआती सफलता चाखेको छ । यसअघि युभेन्ट्स र नेपोली दुवै सप्ताहन्तको खेलमा विजयी रहे ।
कोन्टेको आगमनपछि चिनियाँ लगानी रहेको इन्टरले सन् २०१० यता पहिलोपल्ट लिग जित्ने सम्भावना बोकेको छ । युभेन्ट्स र चेल्सीका पूर्व प्रशिक्षक कोन्टेले लुकानो स्पालेटीको स्थान लिएका हुन् । स्पालेटीको नेतृत्वमा इन्टर गत सिजन लिगको चौथो स्थानमा रहेर युरोपेली च्याम्पियन्स लिगका लागि छनोट भएको थियो ।
कोन्टेले तीनपल्ट सिरी ‘ए’ र एकपल्ट इंग्लिस प्रिमियर लिग उपाधि जितेका छन् । खेलाडी छँदा लेसी नै कोन्टेको सुरुआती क्लब थियो । लेसी सात वर्षको अन्तरमा सिरी ‘ए’ मा उक्लेको हो । कोन्टेले पूर्व कप्तान माउरो इकार्डीलाई बेन्चमा पनि राखेनन् । अर्जेन्टिनी खेलाडीले इन्टर छाड्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:३३
असुरक्षित र पटक–पटकको गर्भपतनका कारण रक्तस्राव नरोकिने, बेहोस् हुने र संक्रमणजस्ता समस्या लिएर महिला अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा पुगिरहेका हुन्छन् ।
भाद्र ११, २०७६ फातिमा बानु
काठमाडौँ — उमेरले तीन दशक पनि नकाटेकी उनको अनुहारमा चाउरी देखिन्छ । शरीर पनि ख्याउटे छ । काखमा पाँच सन्तान छन् । थोरै काम धेरै थकानले उनी दिक्क छिन् । २७ वर्षको उमेरमा सात पटक गरेको गर्भपतनका कारण शारीरिक, मानसिक र आर्थिक हिसाबले कमजोर भइसकेको उनी बताउँछिन् । ‘पाँचचोटि त औषधि खाएर बच्चा फालें । दुई पटक अप्रेसन गरें,’ उनले सुनाइन् ।
श्रीमान्ले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न नमान्दा धेरै पटक गर्भपतन गर्नुपरेको उनले बताइन् । श्रीमान्ले आफूलाई पनि साधन प्रयोग गर्न नदिएको उनले दुखेसो पोखिन् । ‘प्रत्येक पटक गर्भपतन गर्न जाँदा स्वास्थ्यकर्मीले साधन प्रयोग किन नगरेको भन्दै हकार्छन्,’ उनले भनिन् । उनी धेरै पटक गर्भपतन गरेका कारण महिनावारी गडबडी र पाठेघर संक्रमणको सिकार भइसकेकी छन् । अझै कति पटक गर्भपतन गराउनुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले पनि उत्तिकै सताएको छ ।
थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा असुरक्षित गर्भपतनका जटिलता लिएर उनीजस्ता महिला दिनहुँ इमर्जेन्सी कक्षमा भर्ना हुन्छन् । अत्यधिक रक्तस्रावले बेहोस हुने, औषधि सेवनपछि रक्तस्राव नरोकिने र संक्रमणका समस्या लिएर बढी महिला आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालकी प्रशासन प्रमुख रानु थापा भन्छिन्, ‘तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन नगराएका कारण कति त आधा गर्भ पेटमै छुटेर आउँछन् । अस्पताल भर्ना गरेर धेरै दिन उपचार गरेपश्चात् मात्रै उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ ।’
विशेषज्ञका अनुसार धेरै पटक गर्भपतन गराउँदा महिलाको ज्यानै जान सक्ने खतरा हुन्छ । गर्भपतनको जोखिमबारे जानकार नभएका महिलाले यसलाई परिवार नियोजनको साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले बताए । ‘जति पटक शरीरभित्र उपकरण छिरायो उति नै पाठेघर संक्रमित हुने जोखिम बढ्छ । असुरक्षित गर्भपतनले पाठेघरको क्यान्सर गराइदिन सक्छ,’ उनले भने ।
डा. सुवेदीले रक्तस्राव नरोकिएर कति महिलालाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको सहारामा राख्नुपर्ने स्थिति आउने गरेको बताए । उनका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले मिर्गौला फेल गराएर ज्यानसमेत जान सक्छ । यौन सम्पर्क राख्दा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरी सकेसम्म गर्भपतन गर्नुपर्ने स्थिति नै आउन नदिन डा. सुवेदी सल्लाह दिन्छन् । ‘गर्भपतन नै गर्नुपरे नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्था र तालिम प्राप्त चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मीकहाँ जानुपर्छ,’ उनले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार असुरक्षित गर्भपतनको जटिलताका कारण विश्वमा ५० लाख महिला विभिन्न रोगबाट ग्रसित छन् । १३ प्रतिशत मातृ मृत्युदरको कारण पनि यही हो । विश्वमा प्रतिवर्ष करिब ५ करोड महिलाले गर्भपतन गराउँछन् । ४५ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित नै हुने गरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक अध्ययन २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा अझै ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक अवसरमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।
डा. सुवेदी २० वर्षमुनिका किशोरीले गर्भपतन गराउँदा उनीहरूमा बाँझोपनसमेत बढ्ने बताउँछन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्था किशोरीमैत्रीपूर्ण नहुँदा उनीहरू असुरक्षित गर्भपतनतर्फ धकेलिएका छन् । असुरक्षित गर्भपतन घटाउन निःशुल्क सेवामा मात्रै लगानी नगरी सरकारले गर्भपतनबारे विद्यालय, घर र समुदायलाई नै सचेत गराउनुपर्ने प्रसूति गृहका गर्भपतन सेवा इन्चार्ज जयन्ती छत्यालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाइसक्यो, यो निःशुल्क छ भन्ने सहरका शिक्षित महिलालाई नै थाहा छैन । यहाँ आएका अधिकांशले गर्भपतन सेवाको शुल्क सोध्छन् ।’ गोपनीयतामा ढुक्क हुन नसक्दा कमै मात्रै किशोरी यो सेवा लिन आउने गरेको उनले बताइन् ।
नेपालमा १६ वर्षअघि गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको हो । यससँगै सरकारी संस्थाबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि सुरु भयो । तर विभिन्न कारणले महिला अझै असुरक्षित गर्भपतनतर्फ धकेलिइरहेका छन् । कृपाले २०१४ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा गर्भपतन गर्ने आधाभन्दा बढीले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराइरहेका छन् ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले महिलाको मञ्जुरीमा १२ सातासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । गर्भपतन नगराए महिलाको ज्यान जान सक्ने खतरा भए मञ्जुरीमा त्यस्तो गर्भपतन गराउन मिल्छ । गर्भवती महिलालाई करकाप गरी, डराइधम्क्याई या कुनै प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन भने कानुनले बन्देज लगाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:२५